Times Of Nepali » केरा खानुहुन्छ ? केराबारे २० रोचक तथ्यहरु जानीराखौ।
२२ बैशाख २०७६ |
प्राय केरा खाइरहेका हुन्छौ । तर केराबारे यी २० रोचक यथार्थ जानेपछि यो तपाईलाई झन् स्वादिलो लाग्न सक्छ । आउनुहोस् केराबारे २० तथ्यहरु जानी राखौं : केरामा ट्राइप्टोफान पाइन्छ जुन मानिसले खाएपछि सेरोटोनिनमा रुपान्तरिक हुन्छ । यसले शरीरमा सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँछ जसले प्रभावकारी र प्राकृतिक ढंगबाट डिप्रेसनका असरहरु घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । केरामा प्रशस्त मात्रामा शक्तिबर्द्धक तत्वहरु हुन्छ ।
कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि दुईवटा केरा खानाले शरीरमा नयाँ ढंगले शक्तिको प्रवाह हुन्छ । केरामा पाइने पोटासियमले मांशापेशी बाउँडिने र पीडा हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दछ । दूधसँग केरा खानुहोस्। यसबाट प्रशस्त क्याल्सियम पाइन्छ । महिलाको लागि केराको सेवन विशेष उपयोगी छ ।
किनकी यसले महिनावारीसम्बन्धी दुःखाईको फैलावट घटाउँछ । केरामा अधिक मात्रामा भिटामिन बि पाइन्छ, जसले सेतो रक्त कोषिकाको वृद्धिमा सहयोग गर्दछ । यसबाट शरीरमा विभिन्न मधुमेहजस्तै धेरै रोगहरुबाट बचाउँछ । तपाई रक्तअल्पताबाट पीडित हुनुहुन्छ भने केरा तपाईको साथी बन्न सक्छ । किनकी केरामा फलाम तत्व पाइन्छ ।
उच्च रक्तचापको समस्या झेलिरहेकाहरुलागि पनि केरा साथी बन्न सक्छ, किनकी यसले उच्च रक्तचाप घटाउन सहयोग गर्दछ । केरामा पेक्टिन नामक तत्व पाइन्छ जसले हामीलाई पाचनमा सहयोग गर्दछ । मुटु पोल्ने गर्छ ? केरा खानुहोस् । यसमा एन्टासिड औषधीको गुण हुन्छ । केरा एक मात्र त्यस्तो खानेकुरा हो जसले पेटमा हुने अल्सरसँग लड्न सक्छ । स्वास्थ्य विज्ञानमा मृगौलासम्बन्धी रोग र हाड टुक्रिने समस्याका लागि केराको सेवनले प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मान्यता राखिन्छ ।
केराको सेवनले कामप्रति दत्तचित्त र सचेत हुन सहयोग पुग्दछ । तपाई जुनसुनै कार्यक्षेत्रमा हुनुहोस्, एउटा केराको सेवनले तपाईलाई कामप्रति कन्सन्ट्रेट गराउँछ । ब्लूबेरीहरु (एकप्रकारको ऐंसेलु) मा जस्तै केरामा पनि अधिक मात्रामा एन्टीअक्सिड्यान्ट पाइन्छ । खाना खाने बेला केरा खानाले रगतमा चिनीको मात्रालाई सामान्यीकरण गर्न मद्दत गर्दछ । किराले टोकेको ठाउँमा चिलाइरहेको छ ? केराको बोक्राको भित्री भाग टोकेको ठाउँमा दल्नुहोस्, यसले तत्काल चिलाउने समस्याबाट मुक्त हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति २२ बैशाख २०७६, आईतवार २२:२१